MEE WINDOWS 10 ỌRỤ - WINDOWS - 2019
Mee Windows 10 ọrụ
Ajụjụ banyere ọrụ Windows 10 bụ otu n'ime ndị na-ajụkarị ajụjụ site n'aka ndị ọrụ: otu esi arụ ọrụ ahụ, ebe ị ga-enweta igodo ọrụ maka ntinye dị ọcha nke Windows 10 na kọmpụta, ihe mere ndịiche dị iche iche nwere otu igodo ahụ na ihe ndị ọzọ yiri ya ga-azaghachi mgbe niile.
Ugbu a, ọnwa abụọ mgbe a tọhapụsịrị, Microsoft bipụtara ntụziaka ntụziaka na ozi gbasara usoro nke ịmepụta usoro ọrụ arụmọrụ ọhụrụ, M ga-akọwa isi ihe ndị metụtara mmalite nke Windows 10 n'okpuru. Melite August 2016: A gbakwunyere ozi ọhụrụ banyere ịbalite, gụnyere na ihe omume nke mgbanwe ngwaike, na-ejikọ ikike ahụ na akaụntụ Microsoft na Windows 10 1607.
Kemgbe afọ gara aga, Windows 10 na-akwado nkwado maka igodo Windows 7, 8.1 na 8. A kọọrọ na mmeghe dị otú ahụ agakwaghị arụ ọrụ na Nwelite Afọ Ọhụrụ, ma ọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ, gụnyere maka ihe ọhụrụ 1607 na nhazi dị ọcha. Ị nwere ike iji ya mgbe echichi nke usoro ahụ, yana site na iji ntanetị dị ọcha site na iji ihe oyiyi kachasị ọhụrụ sitere na weebụsaịtị Microsoft (lee Otu esi budata Windows 10)
Mmelite na arụ ọrụ Windows 10 na mbipute 1607
Malite n'August 2016, na Windows 10, ikikere (nwetara site nwelite nkwalite site na nsụgharị osụm nke OS) ejikọtara ọ bụghị naanị na NJ ID (nke a kọwara na mpaghara na-esonụ nke ihe a), kamakwa na akaụntụ data akaụntụ Microsoft, ma ọ bụrụ na ọ dị.
Nke a, dị ka Microsoft kwuru, kwesịrị inye aka n'ịdozi nsogbu na ịmalite, gụnyere yana mgbanwe dị ukwuu na ngwaike komputa (dịka ọmụmaatụ, mgbe dochie kọmputa motherboard).
Ọ bụrụ na ịchọtaghị ihe ịga nke ọma, na "Update and Security" - "Activation" ngalaba, ihe "Mmezigharị ọrụ" pụtara, nke a na-ewere (na-ekwughị n'onwe ya), ga-echeba akaụntụ gị, ikikere e kenyere na ọnụ ọgụgụ kọmputa ndị eji eji ikikere a.
A jikọtara ọrụ na akaụntụ Microsoft na akpaghị aka na akaụntụ "nna ukwu" na kọmputa ahụ, na nke a, na ntinye ọrụ na Windows 10 ntọala nke mbipute 1607 na n'elu, ị ga-ahụ ozi na "A na-arụ ọrụ Windows site na iji ikikere dijitalụ ejiri ya akaụntụ Microsoft gị. "
Ọ bụrụ na ị na-eji akaụntụ mpaghara, mgbe ahụ n'otu mpaghara mpaghara mpaghara ebe a, a ga-ajụ gị ka ị gbakwunye akaụntụ Microsoft nke a ga - ejikọta ya.
Mgbe agbakwunyere, akaụntụ Microsoft na-eji akaụntụ Microsoft dochie ya, na ikikere a na-agbanye ya. Echiche bụ (ebe a anaghị m ekwe nkwa), ị nwere ike ihichapụ akaụntụ Microsoft mgbe nke a gasịrị, njikọrọ ahụ kwesịrị ịnọgide na-arụsi ike, ọ bụ ezie na ozi mmalite ka enwere ozi na njikwa dijitalụ jikọtara na akaụntụ ahụ.
Dijitalụ Digital dị ka ụzọ isi mmalite (Digital Entitlement)
Ozi nzuzo na-akwado ihe amarara n'ihu: ndị ọrụ ahụ nke kwalitere na Windows 7 na 8.1 na Windows 10 maka n'efu ma ọ bụ zụta melite na Ụlọ Ahịa Windows, yana ndị na-esonye na usoro Windows Adider, na-enweta ọrụ na-enweghị inabata igodo mmeghe, site na ijide ikike nke akụrụngwa (na ngwa Microsoft nke a na-akpọ Digital Entitlement, ihe ga-abụ nsụgharị nsụgharị, amaghị m ma). Nwelite: a na-akpọ ya na Nhọrọ Digital.
Kedu ihe nke a pụtara maka onye ọrụ mgbe niile: mgbe ị kwalitere Windows 10 ozugbo na kọmpụta gị, ọ na-arụ ọrụ na-akpaghị aka na ntọala dị ọcha (ọ bụrụ na ị kwalite site na ikikere).
N'ọdịnihu, ọ dịghị mkpa ka ị na-amụ ntụziaka dị na "Olee otú ịchọta isi nke arụnyere na Windows 10." Mgbe ọ bụla, ịnwere ike ịmepụta ngwa USB USB ma ọ bụ diski na Windows 10 site na iji ọrụ ndị ọrụ na -emepụta nrụnye dị ọcha nke os na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ ahụ, na-ahapụ isi ntinye ọ bụla ọ dị mkpa: a ga-arụ ọrụ ahụ na akpaghị aka mgbe ejikọtara ya na Ịntanetị.
Ntinye aka nke igodo nke edere na mbụ mgbe mmelite ahụ mgbe echichi ma ọ bụ mgbe ọ gasịrị na ihe onwunwe nke kọmpụta dị n'usoro iwu nwere ike ọbụna imerụ ahụ.
Ihe dị mkpa: O di nwute, ọ bụghị ihe niile na-aga n'ihu (ọ bụ ezie na ọ bụ - ee). Ọ bụrụ na ihe ejiri ya rụọ ọrụ ada ada, enwere ntụziaka ọzọ sitere n'aka Microsoft (nke dị na Russian) - enyemaka maka njehie mmemme Windows 10 nke dị na //windows.microsoft.com/ru-ru/windows-10/activation -errors-windows-10
Onye chọrọ igodo mmeghe Windows 10
Ugbu a maka igodo mmeghe: dịka e kwugoro, ndị ọrụ natara Windows 10 site na imelite adịghị mkpa igodo a (ọzọ, dịka ọtụtụ ndị nwere ike ịhụ, kọmputa dị iche na ndị ọrụ dị iche iche nwere ike igodo ahụ , ma ọ bụrụ na ị na-ele ya na otu n'ime ụzọ a maara), ebe ọganihu ịga nke ọma dabere na ya.
A chọrọ igodo ngwaahịa maka ntinye na ịbalite ọrụ na ebe ebe:
Ị zụtara ụdị mbipụta nke Windows 10 n'ime ụlọ ahịa (igodo ahụ dị n'ime igbe).
I zụtara otu Windows Windows site n'aka onye nzigbo ụlọ ahịa (ụlọ ahịa dị n'ịntanetị)
Ị zụrụ Windows 10 site na Licensing Volume ma ọ bụ MSDN
Ị zụrụ ngwaọrụ ọhụrụ na Windows 10 nke ebutere (ha na-ekwe nkwa ihe nkwụnye ma ọ bụ kaadị igodo dị na kit).
Dịka ị pụrụ ịhụ, na oge ugbu a, ọ bụ mmadụ ole na ole chọrọ isi, yana maka ndị chọrọ ya, o yikarịrị ka e nwekwara ajụjụ ebe ị ga-ahụ igodo mmeghe.
Ozi Microsoft ndịọrụ na-arụ ọrụ ebe a: //support.microsoft.com/ru-ru/help/12440/windows-10-activation
Ebugharị mgbe ị gbanwere nhazi nhazi
Otu ajụjụ dị mkpa nke nwere mmasị ọtụtụ ndị: olee otú ntọala a ga-esi arụ ọrụ ọrụ ahụ ma ọ bụrụ na ị gbanwee nke a ma ọ bụ ngwa ahụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ngbanwe ahụ na-eche maka isi ihe dị na kọmpụta ahụ?
Microsoft na-azaghachi ya: "Ọ bụrụ na ị kwalite Windows 10 site na iji melite n'efu ma mezie mgbanwe ngwaike dị ukwuu na ngwaọrụ gị, dị ka dochie a motherboard, Windows 10 nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ. Maka aka na ịmalite, kpọtụrụ nkwado ndị ahịa" .
Nwelite 2016: ikpe ikpe site na ozi dịnụ, malite n'August nke afọ a, ikikere Windows 10 nke a nwetara dịka akụkụ nke mmelite ahụ nwere ike kegide na akaụntụ Microsoft gị. A na-eme nke a iji kwado mmemme nke usoro ahụ mgbe nghazi ngwaike gbanwere, ma anyị ga-ahụ otú o si arụ ọrụ. Ọ nwere ike ikwe ka ịnyefe ọrụ ahụ ka ọ bụrụ ígwè dị iche.
Mbụ, ana m achọpụta na ihe a niile metụtara ndị ọrụ nke nsụgharị nke usoro. Ma ugbu a, ịpị mkpirikpi ọ bụla metụtara metụtara:
Maka ọtụtụ ndị ọrụ, igodo adịghị mkpa n'oge ahụ, ịkwesịrị ịwụ ya na ebe dị ọcha, ọ bụrụ na achọrọ ya. Ma nke a ga-arụ ọrụ mgbe ị natachararịrị Windows 10 site na imelite na kọmputa ahụ, ma arụ ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na akwụkwọ nke Windows 10 chọrọ ijiri ya na igodo, ma ọ bụrụ na i nwere otu ma ọ bụ nke ọzọ, ma ọ bụ njehie mere n'akụkụ n'akụkụ ntọala (lee enyemaka njehie n'elu).
Ọ bụrụ na nhazi nhazi ahụ gbanwere, nbudata nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ, na nke a, ị ga-akpọtụrụ nkwado Microsoft.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-enyo enyo, ị ga - arụ ọrụ ọ bụla kachasị ọhụrụ maka akaụntụ Microsoft gị (ọ bụghị nyocha m n'onwe ya ma ọ na - arụ ọrụ maka ọtụtụ kọmputa; ọ bụghị kpamkpam site na ozi dịnụ).
N'uche m, ihe niile doro anya na nghọta. Ọ bụrụ na, na nkọwa m, ihe edoghị anya, hụ ntụziaka ntụziaka, ma jụọ ajụjụ ndị doro anya na ihe ndị dị n'okpuru ebe a.